आइपिएलः ३ बलिया देशका खेलाडी पूरै प्रतियोगिता खेल्न नपाउने, नेपालीलाई अवसर, Latest breaking news and updates on latest top stories, Video News, national, international, NRN, Gulf News, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery and more. Nepali News from Nepal and All over the Countries.
आइपिएलः ३ बलिया देशका खेलाडी पूरै प्रतियोगिता खेल्न नपाउने, नेपालीलाई अवसर
एजेन्सी। २०१९ कोे इण्डियन प्रिमियर लिग क्रिकेट (आइपिएल)का लागि खेलाडी लिलामीको मिति तोकिएको छ । आइपिएलको १२ औं सिजनका लागि खेलाडीको लिलामी यही वर्षको डिसेम्बरमा हुनेछ । मिडिया रिपोर्टका अनुसार लिलामी डिसेम्बर १७ र १८ मा जयपुरमा हुँदैछ । लिलामीका लागि खेलाडीको छनोट भइरहेको छ । अन्तिम चरणमा पुगेका खेलाडीलाई लिलामीमा जुन टिमले बढी मूल्य दिन्छ उसैले लिन पाउनेछ ।
१२ औं सिजनको आइपिएलमा क्रिकेटका बलिया देश इङल्याण्ड, अस्ट्रेलिया र दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडी पूरै प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन् । यो प्रतियोगिता २९ मार्चबाट सुरु भएर मे महिनाको तेस्रो हप्ता (२०–२२ तारिखसम्म) हुन सक्छ । आइपिएलको समय तालिका भने सार्वजनिक भइसकेको छैन । इङल्याण्ड र अस्ट्रेलियाका खेलाडी १ मे देखि आइपिएल खेल्ने छैनन् जसको अर्थ उनीहरुले अन्तिममा झण्डै ३ हप्ता आइपिएल खेल्ने छैनन् ।
दक्षिण अफ्रिकाका खेलाडी १२ मे देखि आइपिएल खेल्ने छैनन् । उनहिरुले पनि आइपिएलका पछिल्ला झण्डै १० दिनका खेलहरु मिस गर्नेछन् । यी देशका क्रिकेट बोर्डले विश्वकपलाई लक्षित गर्दै आफ्ना खेलाडीलाई आइपिएलमा खेल्ने समयसीमा तोकिदिएको हो । निर्धारित समयपछि यी तीन देशका खेलाडी आफ्नो देशको टिममा प्रशिक्षणका लागि फर्कनेछन् ।
अहिलेसम्म आइपिएलमा सबैभन्दा धेरै विदेशी खेलाडी अस्ट्रेलिया र इङल्याण्डका खेलेका छन् । दक्षिण अफ्रिका, न्यूजिल्याण्ड र वेष्ट इण्डिजका खेलाडी पनि ठूलो परिमाणमा आइपिएल खेल्न आउँछन् । अहिले आइपिएलमा कुनै पनि पाकिस्तानी खेलाडी खेलाइँदैन । अन्य देशका खेलाडी सानो परिमाणमा लिइन्छ । तर, अहिले बलिया देशका चर्चित खेलाडीहरु पूरै प्रतियोगिता खेल्न नपाउने हुँदा नेपालजस्ता भर्खर अघि बढ्दै गरेका देशका नयाँ प्रतिभालाई फाइदा पुग्नेछ ।
आइपिएलमा गएको सिजनदेखि नेपाली खेलाडीले प्रवेश पाइसकेका छन् । पहिलोपटक आइपिएल खेलेका सन्दिप लामिछानेले त्यहाँ राम्रो प्रभाव छोडेका छन् जसले अन्य नेपाली खेलाडीको आइपिएल प्रवेशको बाटो फराकिलो बनाइदिएको छ । यस वर्ष विश्व क्रिकेटमका ठूला हस्तहिरु विश्वकप लक्षित प्रशिक्षणका लागि स्वदेश फर्कनुपर्ने भएकोले उनीहरुको ठाउँमा नयाँ प्रतिभाले खेल्ने मौका पाउनेछन् । यसबाहेक लिलामीमा समेत फ्रेन्चाइजको प्राथमिकता नयाँ प्रतिभामा बढी हुनेछ किनकि विश्व क्रिकेटका ठूला मानिने खेलाडी पूरै प्रतियोगिता खेल्न पाउने छैनन् ।